Astro Colony: mutsva nzvimbo yekoloni vhidhiyo mutambo | Linux Vakapindwa muropa
Astro Colony: mutsva mutambo wekoloni vhidhiyo mutambo
Astro Colony mutambo mutsva urikuuya nekukurumidza. Sayenzi yekunyepedzera mafeni vachada theme, sezvo iri zita rekutsvaga, otomatiki uye nzvimbo yekoloni Muchokwadi, iri zita idzva rakafemerwa neanozivikanwa eFactorio uye Space Injiniya, chete kuti ichaedza kugadzirisa zvese zvinoonekwa kusvika ikozvino.
Pamusoro pezvo, Astro Colony ichave ne risingaperi voxel zvakasikwa, kuti ukwanise kuongorora uye kuunganidza zviwanikwa kuti ugadzire yako nyuchi pane mamwe mapuraneti. Kune rimwe divi, zvese zvichave zvinoparara zvachose. Anonyanya kunakidza maficha eiri mhando yemutambo wevhidhiyo uyo anopa rusununguko rukuru panguva yemutambo.
Durante renyeredzi kuongorora Unogona kuwana mhando dzese dzezvinhu, kunyangwe zvinhu zvakakosha zvauchazoshandisa kuramba uchivaka zvinhu mufekitori. Kuti upedze kutenderera kwakatanga nekutsvaga, muAstro Colony unofanirawo kubvisa zviwanikwa zvaunoda, kuvaka koloni uye woenderera mberi nekuvandudza.
Zvingave sei neimwe nzira, zvikasadaro ingadai isiri nhau yeLxA, vagadziri vayo vakasimbisa kuti ichauyawo yeGNU / Linux distros ...
Kana vari ivo vanogadzira, ndivo studio yePoland Terad mitambo, inotungamirwa naLukasz "Tefel" Czarnecki. Mumwe anozivikanwa nekuve akamboshanda paSplash Damage pamapurojekiti akaita saHalo: Iyo Master Chief Unganidzo uye kunyangwe kuve nyanzvi yemitambo yeGame Dignits ine StarCraft 2.
Parizvino, iwe unogona kubatsira kubhadhara iyo Astro Colony chirongwa mune yayo Kickstarter saiti, nenhamba dzakasiyana zvinoenderana nekugona kwako kwemari (imwe neimwe inokupa mikana yakawanda yekutora chikamu). Ikoko iwe unogona zvakare kuona iyo tirera uye nekudzidza rumwe ruzivo nezve izvo zvichave zita iri kana rikaburitswa Mushandirapamwe uchavhurwa Kusvikira 29 Chikunguru, kunyangwe yakatosvika pachinangwa chayo chekubhadhara vanhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Astro Colony: mutsva mutambo wekoloni vhidhiyo mutambo
PDF Sanganisa Chishandiso 1.0: iyo nyowani vhezheni yechishandiso ichi chishandiso chiri kunze